ब्लगिङ र माइक्रो ब्लगिङ दुबैमा छुट्टा-छुट्टै मज्जा छ-मुस्कान पुडासैनी - MeroReport
ब्लगिङ र माइक्रो ब्लगिङ दुबैमा छुट्टा-छुट्टै मज्जा छ-मुस्कान पुडासैनी
ब्लगिङ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने एउटा गजबको थलो हो । त्यसैले ब्लगरहरुले निस्फिक्री आफ्ना अभिब्यक्तिलाई ब्लग मार्फत अभिब्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । ब्लगिङका निम्ति कन्टेन्टसंगै कन्सेप्ट पनि उत्तिकै महत्पवुर्ण कुरा हो। कहिलेकाँही कन्टेन्टलाई कन्सेप्टले मात्रै पनि उछिनिरहेको हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ लाखौँ शब्दहरुलाई बुनेर राखिएको कथात्मक ब्लग भन्दा एक दुईवटा तस्विर र उक्त तस्विर सुहाउँदो केप्सन राखिएका फोटो ब्लगहरु पनि उत्तिकै चर्चित भएका हुन्छन् । शब्दभन्दा पनि तस्विर र उक्त तस्विर सुहाउँदा आफ्ना छोटाछोटा अभिब्यक्तिहरु राखेर ब्लगिङ संसारमा पाईला राख्दैछन् मुस्कान पुडासैनी नामका एक युवाले । काठमाण्डौ सोह्रखुट्टे बस्ने मुस्कान अहिले प्लस टुको पढाई सकेर अब आउदोँ अध्ययनका निम्ति तयारीमा छन् । ट्विटरमा आफूलाई धेरै सक्रिय राख्न रुचाउने मुस्कान आफूलाई ब्लगिङ संसारमा अब सक्रिय बनाउन ब्लग सुरु गरेको बताउँछन् । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ 'साताका ब्लगर'मा यसपाली हामीले उनै मुस्कानसंग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ मुस्कानसंगको कुराकानी:
ब्लग लेख्न भर्खरै सुरु गर्दैछु तर सोसल मिडियाका अन्य प्लेटफर्महरु फेसबुक, ट्विटरमा चाँही बढी नै याक्टिभ छु, नियमित ब्लगर हुँ, भनेर परिचय दिईहाल्ने भईसकेको छैन र त्यसोगर्दा अरुले गिल्ला गर्लान, त्यो छोडेर सोसल मिडियामा आफुलाई चिनाउने, अरु त्यस्तो पहिचान खासै केहि बनेकै छैन ।
तपाँइको ब्लग http://muskanpudasainee.blogspot.com/ का बारेमा बताइदिनुस त अलिकति, कस्तो ब्लग हो र यहाँ तपाँइ कस्ता कुराहरु अभिब्यक्त गर्नुहुन्छ?
अहिले ब्लग भर्खर सुरु गर्दैछु, सुरुवाती अवस्थामै छ । अब बिस्तारै आफुलाई लागेको कुराहरु लेख्ने माध्यम बनाउन खोज्दै छु । यो यस्तो खालको ब्लग हो, भनेर भन्ने त्येस्तो कुनै टाइटलनै भेटिसकेको छैन मैले ।
ट्विटर मार्फत माईक्रो ब्लगिङमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । सामाजिक संजालमा आफू रहनुका पछाडि मुख्य कारण या आकर्षण के हो झैँ लाग्छ यहाँलाई?
कहाँ के घटना भयो, यस्ताकुराहरु यहाँ छिट्टै थाहा हुन्छ, त्यस बाहेक सम्बन्ध र सहयोग आदानप्रदान समेत भइरहेको छ र आफ्ना साथी संगीसंग पनि सम्पर्कमा रहन सजिलो हुने भएकाले सोसल मिडियाहरुमा सक्रिय छु ।
सोसल मिडियाका प्लेटफर्महरुमध्ये ट्वीटर, फेसबुक, ब्लग, जि+, आदि ईत्यादी चलाउछु ।
त्यस्तो भनिहाल्न अलि नमिल्ला ! ब्लग त आफुलाई लागेको कुरा लेख्ने एउटा ठाँउ जसरी हेर्छु म त । तर त्यसले अरुको मानसपटलमा नकारात्मक असर पार्नु भने भएन । नत्र त जसले जे भोगेको छ, जे देखेको छ त्येही लेख्ने न हो !
अब तपाँइको ब्लगको कुरा गरौँ, तपाँइको ब्लगमा फोटो र त्यो फोटो झल्काउने छोटा स्टाटस मात्रै रहेछन्। खासमा यहाँको ब्लगिङको रुची के हो? अभिब्यक्त गर्न खोजेको सवालका बिषयमा भन्नुपर्दा?
मैले भनिसकेँ, अहिले ब्लग भर्खर सुरु गर्दैछु, फोटोग्राफी इन्ट्रेस्टको बिषय हो त्यसैले अहिले आफुले खिचेको केहि तस्बिरहरुलाई मात्र समेटेको छु । बिस्त्तारै सिक्दैछु ब्लगिङ गर्न, सबैजसो कुरा समेटेर लेख्ने विचार छ अब ।
ट्विटरमार्फत माइक्रो ब्लगिङमा पनि उत्तिकै लागि पर्नुहुन्छ । ट्विटरमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो र यहाँलाइ लेख्न मन लाग्ने सवालहरु के हुन?
ट्वीटर एकाउन्ट बनाएको त डेढवर्ष भयो, तर साँच्चिकै चलाउन थालेको भने त्यस्तै एकवर्ष भयो होला । यस्तो लेख्छु, उस्तो लेख्छु भन्ने छैन, आफुलाई लागेको कुरा फ्याट्टै लेखिदिन्छु । त्यो छोडेर त्यै समाजमा घटेका कुरा लेख्न बढी मनपर्छ ।
सुरु-सुरुमा लट्टो लिएर चलाइयो, तर पछि बिस्तारै जाँगर मर्दैगयो । अहिले यस्सो के हुँदैछ भनेर मात्र हेर्ने गरेको छु ।
अलि-अलि उस्तै हुन्, आफ्नो ठाउमा दुबैको आफ्नै महत्व छ जस्तो लाग्छ । कुन ठाउमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरामै भर पर्छ यो त ।
हाहाहाहा, प्रश्न नै रमाइलो लाग्यो यो । कुरो आयो फाष्टफूड र पकाएर खाएको खानाको । दुबैमा आ-आफ्नै टेष्ट हुन्छ। अँझ आफुले पकाएर खाएको, खाना झन् मिठो होला, त्यसमा मिहेनत अलि बढी लाग्ने भएकाले ! मेरो कुरा गर्दा, म ब्लगिङ र माइक्रो ब्लगिङ दुबै गर्छु, दुबैमा छुट्टा-छुट्टै मज्जा ।
ब्लगिंङ छोडेर फोटोग्राफी, म्युजिक र घुमघाममा एकदमै रुची छ ।
राम्रै देख्छु म त ! कहीँकतै केहि राम्रो/नराम्रो हुने बित्तिकै यहाँ कुरा उठिहाल्छन् । आ-आफ्नो सकारात्मक/नकारात्मक विचार राख्न थालेकाछन् मान्छेहरु । जसले गर्दा नबुझेको कुराहरु पनि बुझ्न सजिलो भएको छ जस्तो लाग्छ ।
आफुलाई लागेको कुराहरु लेख्छन् मान्छेहरु । सबै कुरा राम्रो हो भन्ने मिल्दैन । दुरुपयोग पनि भएकै होला, तर अहिलेसम्म नराम्रो भन्नुपर्ने त्यस्तो केही देखेकै छैन ।
खासै पढ्दिन । मैले पढ्ने ब्लगहरु भनेका, सविन “एकतारे” को http://www.ektaare.blogspot.com/ जनकराज भट्टको http://www.jawknock.com/ जोतारे धाइबाको http://dhaiba.blogspot.com/ बाबाजीको http://baabajee.wordpress.com/ आदि हुन् ।
यस्तोउस्तो भन्ने त छैन, तर प्राय:जसो फोटोग्राफी, कथा, कविता समेटिएका ब्लगहरु पढ्न मनलाग्छ ।
ब्लगिङ गर्दा पनि आचारसंहिता पालना गरे त के मज्जा भयो र ! तर ब्लगिङ गर्नेले आफ्नो मर्यादाभित्र रहेर गर्नुपर्‍यो । त्यसो गरे कसैलाई केहि असर पर्दैन । आचारसंहिता को के काम अनि !
सोसल मिडियामा पनि उत्तिकै सक्रिय भएका नाताले भन्दिनुस् न, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु: ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
सबै उस्तै उस्तै हुन्, तर डिटेलमा जाँदा, फेसबुक अलि बढि नै हावा लाग्छ । बढी दुरूपयोग भएको छ । ट्वीटरमा समसामायिक बिषयका कुरा हुने भएकाले यो धेरै ठिक लाग्छ । ब्लग त झन् “हाइ लेबल” भइहाल्यो ! हाहा
किन नपाउनु ! ब्लगबाट नै समाज सेवाका कामहरु भएको नि देखेको छु मैले । यो राम्रो कुरा हो !
ब्लगिङलाइ बैकल्पिक मिडिया, आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने थलो र ब्यक्तिको निजी मिडिया भनिए पनि यो अँझै टाँठाबाठा र बोल्ने थलो पाउनेहरुको पहुँचमा मात्रै सिमित छ पनि भनिन्छ नि, किन होला?‍
हो पनि । ब्लगलाई त्यहि रुपमा लिईएको छ । यसको बारेमा चर्चा हुनु स्वभाविकै नै हो । ब्लग टाँठाबाठाकै पहुँचमा धेरै हुनु, मान्छेहरुमा इन्टरनेटको ज्ञान अलि कम भएर पो हो कि !
एकदम, ब्लगिङ एककिसिमको पत्रकारिता नै हो । बाहिर नआएका वा आउन नसकेका आफ्ना धारणाहरु/कुराहरु ब्लग मार्फत मज्जाले निकाल्न पाइन्छ । जुन एकदमै राम्रो कुरा हो ।
मैले सोचेकै थिईन “ब्लगर अफ द विक” टाइटल पाएर मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भमा फिचर हुन पाउँछु भनेर ! मेरा अनुभवहरु सुनाउन पाएँ, त्यसका लागि 'मेरो रिपोर्ट'लाइ हृदय देखि नै धन्यवाद ।
Comment by pawan neupane on September 11, 2013 at 3:37pm